FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA HUSKY DOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Husky Dog
Ny olon-dehibe Alaskan Husky izay mankafy mazavà sled hisintona sy hisintona ny tompony amin'ny ski
Lisitry ny Alika Husky Mix Dogs
Huskies Alaska dia matetika lehibe kokoa noho ny Huskies Siberia . Ny Huskies Alaska dia mazàna matanjaka kokoa amin'ny fananganana noho ny Siberianina. Matetika ny siberianina dia manana manga na mitambatra amin'ny maso manga sy volontsôkôlà, fa ny masoaskanes Huskies matetika manana maso volontany.
bernese tendrombohitra alika mifangaro amin'ny alemà mpiandry ondry
Alkohol Huskies dia miteraka alika miasa indrindra. Manana fiaretana bebe kokoa amin'ny hazakazaka sled izy ireo noho ny an'ny Huskies Siberian. Malemy sy milalao, ity alika falifaly ity dia tena tia ny fianakaviany. Ankizy kely ao am-pony, malina izy ireo, tia olona ary be fitiavana, mora mandeha ary mora tohina, na dia manana hery be aza izy ireo amin'ny ankapobeny, indrindra fa toy ny alika kely. Tsara amin'ny ankizy ary sariaka amin'ny olon-tsy fantatra, tsy mpiambina mpiambina izy ireo, satria kely ny fahitany azy ary tia ny olon-drehetra izy. Ny Huskies dia tena manan-tsaina ary trainable , fa manana ny sainy samirery izy ireo ary tsy hanaiky baiko fotsiny raha hitany ny teboka ary raha tsy mampiseho mpitarika ianao dia tsy ho hitan'izy ireo ny antony mankatoa anao. Training mila faharetana, tsy fitoviana ary fahatakarana ny toetran'ny alika Arctic. Raha tsy mafy orina 100% ity alika ity ianao, matoky tena, tsy miovaova mpitarika fonosana , hanararaotra izy raha afaka, lasa fanahy iniana sy ratsy toetra . Ny Huskies dia manao tsara jogging namana , raha mbola tsy mafana loatra. Huskies mety sarotra vaky trano . Tia midradradradra ity karazana ity ary mankaleo mora foana. Tsy tian'izy ireo izany avela irery , ka raha ity no karazany ho anao, dia azonao atao ny mieritreritra ny hanana roa. Husky manirery, na Husky tsy ampy fanatanjahan-tena ara-tsaina sy ara-batana afaka manjary manimba be . Tsarovy fa ny Husky dia alika mivalampatra am-po sy fanahy. Tsara miaraka amin'ny biby hafa izy ireo raha notezaina niaraka tamin'ny alika kely. Ny Huskies dia mpihinan-kanina ary tsy mila sakafo firy noho izay antenainao. Tia mandehandeha ity karazany ity. Ny Huskies Alaska dia afaka manao namana mahafinaritra ho an'ireo olona mahalala ny zavatra antenaina amin'ireo biby tsara tarehy sy manan-tsaina ireo. Na dia misy maningana ny fitsipika rehetra aza, dia misy toetra mampiavaka ny karazany izay hita matetika amin'ny mpikambana ao amin'ity karazana Artika ity.
Milanja: Lehilahy 40 - 60 pounds (18 - 27 kg) Vavy 35 - 48 pounds (16 - 22 kg)
Matetika izy ireo dia tsy atolotra ho an'ny trano, na izany aza dia afaka mipetraka ao amin'ny trano izy ireo raha tsara fiofanana sy ampiasaina tsara. Ny Huskies Alaska dia tena mihetsika ao anaty trano ary manao ny tsara indrindra amin'ny tokontany malalaka misy fefy. Noho ny palitaony mavesatra dia aleon'ireto alika ireto ny toetrandro mahafinaritra. Ny olona iray dia tokony hampiasa fahiratan-tsaina momba ny fitazonana azy ireo amin'ny hafanana amin'ny alàlan'ny fanomezana alokaloka sy fifehezana rivotra ampy. Ity karazana ity dia aleony miaina anaty fonosana.
Ny Huskies Alaska dia mila fanatanjahan-tena mety, ao anatin'izany mandeha lava isan'andro . Mitandrema amin'ny fanatanjahan-tena be loatra amin'ny toetr'andro mafana. Mila tokotany lehibe misy fefy avo izy ireo, saingy aleveno eo am-pototry ny fefy ilay tariby satria mety hitrandraka ny lalan-kalehany izy ireo ary handeha hihaza.
Manodidina ny 10 -15 taona.
Alika kely 4 ka hatramin'ny 10 eo ho eo
Tsy mila fikarakarana firy ny palitao raha tsy mandritra ny vanim-potoanan'ny fandatsahana mavesatra indroa isan-taona, rehefa tsy maintsy atambatra tsara amin'ny volo vy izy ireo.
Ny Huskies Alaska dia ampiakarina tsara mba hamokarana ireo alika miasa tsara indrindra araka izay tratra. Ny fiompiana Alaskan Husky dia fiompiana nomanina ary nolovana ara-teknika, na izany aza dia tsy madio izy ireo ary tsy voasoratra amin'ny AKC na CKC satria indraindray dia miampita miaraka amin'ny karazany avaratra sy tsy avaratra mba hamokarana ireo alika miasa tsara indrindra azo atao.
Hijery ohatra hafa momba ny Husky Alaskan
Sarin'i Husky Alaskan 1
Alaskan Husky Sary 2
Alika mitifitra alika
maltese miharo mpiandry alemanina
lavaka afangaro amin'ny bulldog amerikana
omby terrier mifangaro amin'ny bulldog anglisy
sary cane corso mastiff
zanak'alika pitbull fotsy sy fotsy